अब कतारमा Metrash2 एप मार्फत नै यसरी भिसा परिवर्तन गर्न सकिने ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
अब कतारमा Metrash2 एप मार्फत नै यसरी भिसा परिवर्तन गर्न सकिने !
गृह मन्त्रालयको सेवालाई सरलीकरण र डिजिटलीकरण गर्ने क्रममा मेट्रास २ मा ६ नयाँ सेवा थपिएको छ ।
तिनीहरूमा भर्ती आवेदन समीक्षा समितिका केही सेवाहरू, भिसा सेवाहरू र स्थापना दर्ता सेवाहरू समावेश छन्।मन्त्रालयले आफ्नो ट्विटर खातामा वर्णन गर्यो कि Metrash2 मा थपिएका नयाँ सेवाहरू समावेश छन्:
असाधारण भिसा विस्तार सेवा: Metrash2 मा रहेको ‘भिसा सेवाहरू’ विन्डोले व्यवसायी भिसा, आधिकारिक भिसा र पर्यटक भिसाका लागि असाधारण भिसा विस्तार सेवा पूरा गर्न अनुमति दिनेछ।
यो सेवाले निर्दिष्ट सर्तहरू अनुसार केही प्रकारका भ्रमण भिसाहरू विस्तार गर्न अनुमति दिन्छ। निवेदकले मुद्दाको व्याख्या गरी आवश्यक कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्छ। आवेदन इलेक्ट्रोनिक रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ।
भिसा धारकहरूको लागि रोजगारदाता परिवर्तन सेवा: Metrash2 ले अब भिसा धारकहरूको लागि रोजगारदाता परिवर्तन सेवा पहुँच गर्न र पूरा गर्न अनुमति दिन्छ। यदि हालको रोजगारदाताले परिवर्तनको लागि एनओसी उपलब्ध गराएमा यो सेवाले कार्य भिसामा देश भित्र रहेका प्रवासीलाई एक रोजगारदाताबाट अर्को रोजगारदातामा परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।
परिवारका लागि प्रायोजक परिवर्तन गर्दै: Metrash2 मा ‘रेसिडेन्सी सेवाहरू’ विन्डोले तपाईंलाई ‘नियोक्ता परिवर्तन – पारिवारिक सम्बन्ध’ सेवा पूरा गर्न अनुमति दिन्छ। पारिवारिक प्रायोजनमा रहेका प्रवासीहरूले आफ्नो प्रायोजनलाई परिवारको अर्को सदस्यमा परिवर्तन गर्न यस सेवाको फाइदा लिन सक्छन्। नयाँ होस्टले प्रायोजन परिवर्तनको लागि आवेदन बुझाउनु पर्छ र आवश्यक कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्छ। आवेदनलाई उनीहरूको निर्णयको लागि इलेक्ट्रोनिक रूपमा समीक्षा समितिमा पठाइनेछ।
नवजात शिशुको लागि भिसा सेवा (फैमिली भिजिट भिसामा देश भित्र आमाको लागि): पारिवारिक भ्रमण भिसामा आमाले देश भित्र बच्चा जन्माउँदा परिवार भ्रमण भिसा धारकहरूले यो सेवाको फाइदा लिन सक्छन्। यदि सर्तहरू पूरा भएमा, होस्टले नवजात शिशुको लागि आमालाई जारी गरिएको उही प्रकारको पारिवारिक भ्रमण भिसाको लागि आवेदन दिन सक्छ।
यो सेवा व्यक्तिगत रोजगारदाताहरू र तिनीहरूको स्थितिमा भएकाहरू, जस्तै खेत र माछा मार्ने डुङ्गाका मालिकहरूका लागि उपलब्ध छ। नयाँ रोजगारदाताले रोजगारदाता परिवर्तनको लागि आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ र आवश्यक कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्नेछ। आवेदनलाई उनीहरूको निर्णयको लागि इलेक्ट्रोनिक रूपमा समीक्षा समितिमा पठाइनेछ।